ဒေါ်စု ခရီးစဉ် အထူးသတင်း…………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်စု ခရီးစဉ် အထူးသတင်း………….
ဒေါ်စု ခရီးစဉ် အထူးသတင်း………….
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Mar 7, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 23 comments
2012 ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်
ယမန်နေ့ ညနေ 33း0 ၀န်းကျင်ခန့်တွင် တောင်ငူမြို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ဟောပြောပွဲတွင်
စင်အောာက် လူထုကြားတွင် ဂျင်ကလိ လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား—–အမျိုးသားတစ်ဦး ရင်ဝတွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့၊
ထိုကိစ္စအတွက် ကိုအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဟု သိရသည်
ယနေ့ည 7း15 အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်နေပြည်တော်လမ်း 86 မိုင်တိုင် အရောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်
လုံခြုံရေး ယာဉ်တန်းအား လမ်းဘေး မမြင်ကွယ်ရာမှ လောက်စလုံး(အမာ) ဖြင့် ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်၊
ဖြစ်စဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကားနှင့်တစ်စီးခြားတွင် အဆိုတော်လင်းလင်းနှင့် လူငယ် ၆ ယောက် လိုက်ပါလာခဲ့သော
အစ်ဆူဇူး ဒယ်ဘယ်ကက် ကား လုံခြုံရေးကား မှန်ကွဲပြီး လုံခြုံရေးကားပေါ်ပါ လူငယ်များ ဖူးယောင်ဒဏ်ရာရရှိ။
ကားရှေ့မီးကြီးအား ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်ဟူခန့်မှန်းရ…..။ ထိုအမှုအတွက် ဆိုင်ရာသို့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားသည်ဟု သိရပါသည် ။
ဒီမိုး၊ ဒီရေ၊ ဒီလို လူ တွေ၊ ဒီလို စိတ်ဓာတ် တွေ နဲ့
အမေစု လုံခြုံရေးအတွက် တကယ် စိတ်ပူစရာပါပဲ ။
ခုချိန်ထိကို စိတ်ဓာတ်တွေက အောက်တန်းကျတုန်း
အပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတာက “အဖွဲ့ချုပ်မှ ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဟု သိရသည်”
အောက်ဆုံးမှာရေးထားတာက တော့” ထိုအမှုအတွက် ဆိုင်ရာသို့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားသည်”
ဘယ်ဟာလည်းတော့မသိဘူး … တကယ်ဆိုတိုင်ကြားအမှုဖွင့်ထားရမှာဘဲ။
အမေစုအတွက် ဒုတိယ ဒီပဲရင်းမဖြစ်အောင်တော့ ဆုတောင်းနေရတာဘဲ။
အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်း လွတ်တဲ့နေရာလေးဘဲဝင်ပြိုင်တာတောင် သူတို့တအားကြောက်နေကြတယ်။
“လူထုကြားတွင် ဂျင်ကလိ လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား—–အမျိုးသားတစ်ဦး ရင်ဝတွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့” ဆိုတဲ့ကိစ္စ ကို အမှုမဖွင့်ပါ..
“လောက်စလုံးအမာနှင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လုံခြုံရေးကား မှန်ကွဲပြီး လုံခြုံရေးကားပေါ်ပါ လူငယ်များ ဖူးယောင်ဒဏ်ရာရရှိ။
ကားရှေ့မီးကြီးအား ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်ဟူခန့်မှန်းရ…..” ထိုအမှုအတွက် ဆိုင်ရာသို့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားသည်
ရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ် ac051126 ရေ
​ဒေါ်စုကို human shell ဖြင်.ကာကွယ်ကြပါ။
ရွာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ် ။ ပို့စ်ပြန်မရှာတတ်လို့..
ပထမ.. ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ အဖြစ်
ဒုတိယ.. ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
တတိယအဖြစ်ဆိုး လုံးဝ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးကြပါဗျာ..
မြန်မာတွေ နောက်ကျကျန်နေတာ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ
တိုင်းပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသို့ ပြောင်းလဲနေလို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ယုတ်သိမ်းပေးဂျပါခင်ဗျာ….ဟာ…ဟာ…ဟာ……….။ တေဒင်းဂျိုး ခါလဏှာ မွေဗွေးဂိုက်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေပါတဲ့ယဉ်ဟာ ၆ရက်နေ့ည၇နာရီက ရန်ကုန်မြို့ကနေမြောက်ဖက်ကီလို၁၄၀ဝေးတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်အဖြတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသေစေနိုင်တဲ့ဂျင်ကလိလက်နက်နဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး လောက်စလုံး(အမာ)ကို ကားမှာတွေ့ရှိတယ် လို့ဂျပန်နိုင်ငံရှိ nhk သတင်းဌာနကကြေငြာသွားပါတယ်..
မဲဆန္ဒနယ်မြေလမ်းတလျှောက်မှသိန်းသောင်းချီတဲ့ ပြည်သူများဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြပေမဲ့လည်း NLD(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပိုစတာဆုတ်ဖြဲ ခံရခြင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်မြေတချို့တွင် မဲစာရင်းများ မှားယွင်းနေသောပြဿနာကိစ္စများကြောင့်
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူုမြို့ လူထု
လုပ်တဲ့လူလည်း ကိုယ့်လုပ်ရပ် ပြန်စဉ်းစားမိရဲ့လားပဲ
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ၀င်သတ်သွားတဲ့ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မူတောင် မဖမ်းနှိင် မဖမ်းရဲတဲ့ မြန်မာရဲ
အခုလို လူမသိသူမသိ ယုတ်မာတဲ့ အမူမျိုးဆိုရင်တော့လား…စဉ်းစားပေါ့
သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ စိတ်ဓါတ်တွေလဲ ပြင်ဖို့ကောင်းပြီ…
လက်နက်တွေနဲ့ ဆော်ကြ၊တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်
တွေရဲ့ အလိုကျလုပ်ပေးနေတဲ့ စွမ်းအားရှင်(ခ)ခွေးသူတောင်းစားများ
လက်ချက်ဘဲနေမှာပေါ့။ဒါမျိုးအလုပ်တွေဆို ကြံ့ဖွတ်တွေ လုပ်နေကြ။
ဒီကောင်တွေ ကတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခွေးစိတ် ခွေမာန် တွေ နဲ့ ခွေးကျင့်ခွေးကြံတွေ ပြလာကြပြီ…။ တောက် ခွေးမသားတွေ..။ ထွီ
ဒေတာ အတိအကျနဲ့ အသိပေးဖို့ လိုပါတယ်ဗျာ
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တိုင်လို့ရပါတယ်
ကိုအာဂ ရေ..အပေါင်း 2..ပါ ။
ဒိသတင်း ကြား၇တာ..ဒေါသတွေ ထွက်လိုက်တာ.။
တင်ပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .ရွာစားကျော်.ရေ ။
အမေစုရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါသည်၊အာဏာပိုင်များကလည်း လူကြီးလူကောင်းများပီသစွာ အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်စေချင်ပါသည်၊ထိုမှသာ လက်ရှိအစိုးရသည် သန့်ရှင်းသော အစိုးရ၊ပြည်သူတွေလေးစား ယုံကြည်သောအစိုးရဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အမေစု၏လုံခြုံရေးတစ်ခုထဲပင်မဟုတ်ပါ…ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့သည် လက်ရှိအစိုးရတွင်အထူးတာဝန်ရှိပါသည်…။
ကွန်မင့်တွေမှာ နောက်ပြောင်တာမကြိုက်လို့ အနီပေးတာ မပြောလိုပေမယ့်
ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာက ဘာအနှစ်သာရမှမရှိလို့ ပေးချင်သလောက် အနီပေးပါ.. ခုတော့
အကြောင်းမဲ့ ကွန်မင့်အားလုံးကို လိုက်ပီး အနှုတ်ပေးနေတဲ့သူ ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
တချို့ဆိုက်တွေမှာလို ဘယ်သူဘယ်နှစ်ဦးကတော့ အပေါင်းပေးပြီး ဘယ်သူတွေကတော့ အနှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုး စာရင်းပါမြင်ရအောင် လုပ်ပေးထားနိုင်မလားခင်ဗျာ..
ရွာသား အချင်းချင်း ပိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သဘောထားပေးရာရောက်သလို
သက်သက်နှောက်ယှက်လက်ကမြင်းတဲ့ မအေရိုးတွေကဘယ်သူဆိုတာ သိနိုင်တာပေါ့ဗျာ
အန်တီစု မော်လမြိုင်ခရီးစဉ်အကြောင်းလေး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
မော်လမြိ်ုင် လူထု ဟောပြောရန် မြို့တွင်း၌ မရခြင်း အပေါ် မြို့ခံများ ဝေဖန်
မတ်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ (YPI)
လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် မော်လမြိုင်မြို့ လူထုဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်မည့် နေရာအတွက် မြို့နှင့် ၆ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ၆ မိုင်ကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်းကိုသာ ခွင့်ပြုခြင်းအတွက် မော်လမြိုင်မြို့ခံများက ဝေဖန်ပြောဆိုလျှက် ရှိကြသည်။
မော်လမြိုင်မြို့ ဘိုကုန်းရပ်ရှိ သံလွင်ဥယျာဉ် မြေနေရာကို အသုံးပြုခွင့် တောင်းခံရာတွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် သစ်ပင်များ ပျက်စီးမည် စိုးသဖြင့် ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ အကြောင်းပြချက်သည် ယုတ္တိမရှိသည့် အကြောင်းပြချက် အဖြစ် ပြောဆိုကြသည်။ မြို့ခံများက ထောက်ပြသည့် အချက်မှာ သံလွင် ဥယျာဉ်ကွင်းမှာ မကြာခဏ ဈေးပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိရာ လူပရိတ်သတ် ရာထောင်ချီ အသုံးပြုနေသည့် နေရာဖြစ်၍ ယခုလူထုစည်းဝေးပွဲ ခွင့်မပြုခြင်းသည် ယုတ္တိမတန်သည့် အဖြစ်အပျက် တခုအနေဖြင့် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မြို့ခံတဦးက “ မြို့ပြင်ကို ထုတ်တာပေါ့ဗျာ၊ သက်သက်ညစ်တာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ မြို့ကလူတွေတော့ ဟောပြောမယ့်နေရာကို လိုက်ကြမှာပေါ့ ” ဟု YPI သို့ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ သံလွင်ဥယျာဉ် ကွင်းနေရာ သုံးခွင့်မပြုခြင်းကို မတ်လ ၆ ရက်နေ့က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုန်းမြင့်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ဖိတ်ကြားက အသိပေးခဲ့သည်ဟု မြို့ခံ ဦးထွန်းသန်းကပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မတ်လ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်နေ့များတွင်မွန်ပြည်နယ် သို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များအတွင်း မန္တလေး၊ ဖျာပုံ၊ အစရှိသည့် မြို့များ၌ မြို့ခံလူထုအားဟောပြောမည့် နေရာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသအာဏာပိုင်များကြောင့် အခက်အခဲ နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။